के घट्ला त सेयर ब्रोकरको कमिसन ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > के घट्ला त सेयर ब्रोकरको कमिसन ?
के घट्ला त सेयर ब्रोकरको कमिसन ?
काठमाण्डौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमिसन शुल्क आधा घटाउन प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले यस सम्वन्धमा पहल गर्न नसकेपछि सेयर कारोवार पश्चात ब्रोकरले लिने कमिसन घटाउने सम्वन्धमा अझै ठोस पहल हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड, ब्रोकर एसोसिएसन तथा नेप्सेका प्रतिनिधिहरुसित छलफल गरेर मात्रै ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे निर्णय हुने जनाएको छ। ८ वर्षअघि दैनिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुँदा जति ब्रोकरको कमिसन शुल्क थियो, अहिले कारोबार रकम १ अर्बको हाराहारीमा पुग्दा पनि उत्ति नै छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसअघि ब्रोकरको कमिसन आधा घटाइनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेको थियो। ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबारमा ब्रोकरले १ प्रतिशत कमिसन शुल्क लिँदै आएका छन्। यसलाई घटाएर ०। ५ प्रतिशत पुर्याउन बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ।
२०७३ जेष्ठ ६ गते १२:०८ मा प्रकाशित
सहकारीले खोले दूध सङ्कलन, प्रशोधन उद्योग, मन्त्रीले गरे उद्घाटन
आन्तरिक राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबीच सम्झौता
छाक टार्नै गाह्रो हुने परिवारको बाख्रापालनबाट फेरियो जीवन
सनराइज फस्ट म्युचुअल फन्डको १० करोड युनिट असोज ८ देखि खुल्ने
शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै गर्यो थप अन्य जिल्लाका प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन
यस वर्षको उत्कृष्ट लाभांश घोषणा गरेको एनएमबि बैंकसहित भोलि यी ६ कम्पनीको एजिएम
बसमा आगो लाग्दा कम्तिमा २६ को मृत्यु